intengo yezinhlanzi yokwenza imishini evela kubakhiqizi baseChina ngekhwalithi ephezulu
Amandla:18.5kw + 0.75kw isigaba sesithathu
Ikhono:200~ 300kg / h
Usayizi wepellets wokugcina:0.9-15mm
Isetshenziselwa:ukwenza ukudla kwezinhlanzi,ukudla kwekati,ukudla kwenja,Ukudla kwezilwane zasekhaya
Ukwakheka kwama-pellets wokugcina:ijamo lebhola,ijamo lamathambo,ukwakheka kwenhliziyo,ukwakheka kwezinyawo
Kudingeka umswakama wezinto ezingasebenzi:15-25%
Izinhlanzi Zokudla Okuphilayo: Ukucwayiza noma ukuntanta?
Ukudla kwezinhlanzi okuthengiswayo kungahlukaniswa ngokuntanta (ikhishwe) noma ukucwila kwendabuko (ingcindezi) pellets. Kokubili ukudla okuntantayo nokushona kungakhiqiza ukukhula okwanelisayo, kepha ezinye izinhlobo zezinhlanzi zithanda ukuntanta, abanye bayacwila. Kunokubili okuhle nokubi zombili kulezi zinhlobo ezimbili zama-pellets. Noma kunjalo, ukusetshenziswa kwama-pellets ezintantayo kunikeza izinzuzo eziningi ngokuqhathaniswa nezinki ezisinki:
1. Yehlisa Imfucumfucu.
Amapellethi okusinki ahlala ezansi kwethangi avame ukulahleka futhi achitheke. Noma kunjalo, le pellets feed ezintantayo zingagcina isimo sayo, ngisho nangemva kokuba semanzini amahora amaningi, okuphakelayo okungabonakali kusasebenza.
2. Yehlisa Isifo.
Izimbotshana ezincibilikayo ezihlala ezansi kwethangi ekugcineni zizobola, okungase kunikeze ukwanda kwamagciwane nokusakazwa kwezifo eziyingozi zezinhlanzi.
Esinye isizathu ukondla ezintantayo (ikhishwe) ama-pellets ngoba abalimi bangabheka ngqo ubukhulu bokudotshwa kwezinhlanzi zakhe futhi baguqule amazinga okudla ngokufanele. Ukunquma ukuthi amanani okondla aphansi kakhulu noma aphezulu kakhulu kubalulekile ekwandiseni ukukhula kwezinhlanzi nasekusebenziseni okuphakelayo kokudla. Noma kunjalo, ama-pellets acwilayo azowela phansi ethangini, ngisho nezinhlanzi azikwazi ukuzithola.
Izinzuzo Zomshini Wokwenza Okuphakelayo Kwezinhlanzi Ezintantayo
◆ Ukuzondla ngokulinganayo futhi njalo: Umshini wokuphrinta ongaphansi kwe-Flat kanye ne-feeder elawulwa yi-transducer uqiniseke ukuthi izinto zokwakha zingondliwe ngokulinganayo futhi njalo.
Efficiency Ukusebenza kahle okuphezulu nokusetshenziswa kwamandla okuphansi: Nge-conditioner, umusi namanzi kungenziwa ngokulimala ngokuqondile egumbini elingaphandle ngokusebenzisa umshini okhethekile, ngalokho ikhwalithi nenani lemikhiqizo kungathuthukiswa kakhulu ngokusetshenziswa kwamandla okuphansi.
Ting Ukusika ngokushesha nangokunembile: Indlela yokusika esetshenziswayo isebenzisa imimese ngobucwebe obuhle, ezinamathisela epuletini yokufa ngesisa futhi zingalawulwa emikhondweni eyisithupha, ingasebenza ngokushesha nangokunembile.
Application Uhlelo lokusebenza olubanzi: Ukulungiswa okuhlukahlukene kwama-bollet bollet kungahle kuhambisane nezidingo ezikhiqiza amafomula ahlukile nezinto zokusetshenziswa.
Life Impilo yenkonzo ende: Ama-screw bolts bese efa acutshungulwa ngokwelashwa kokuqothula, futhi kucutshungulwa ngokunemba okuphezulu kokusebenza futhi ube nesikhathi eside usebenzisa impilo ende.
◆ Ukusebenza okulula: Zonke izingxenye ezisebenzayo njengamavishi enjini, njll, amukele ukwakhiwa kobuntu, ukuze kulungiselelwe ukusebenza kwangempela.
Umehluko phakathi kukaDry kanye neWet Fish Fish Ukwenza Umshini
Umshini wokwenza izinhlanzi wokudla ungenziwa uhlukaniswe ngohlobo olomile kanye nomshini wokugcwalisa uhlobo lwenhlanzi elenza umshini ngokuya ngomswakama wezinto zokusetshenziswa.
1. Uhlobo lokoma
Ukushisa izinto ngamandla wefrati, lo mshini wokuphapha wezinhlanzi odlekayo udonsela izinto zokusetshenziswa emgodini wesikhunta ngaphansi kwesenzo sokususa isikulufa. Ingcindezi kanye namazinga okushisa kwama-pellets anciphisa kakhulu lapho ephuma emshinini, futhi umswakama uyavela. Lapho-ke izinto zokuzikhukhumeza ziyakhukhumala bese ziphendulwa ama-pellets ngesakhiwo se-porous. Ngesikhathi senqubo, umswakama usukela 15 ukuze 20 amaphesenti.
2. Uhlobo lweWet
Umgomo wokusebenza wohlobo olumanzi uyafana nohlobo owomile. Kepha okwedlule kudinga ukwengeza amanzi noma umusi emshinini wokuphaka izinhlanzi ukwandisa umswakama kuwo 20 amaphesenti, noma ngaphezulu kwe 30 amaphesenti ngesikhathi senqubo. Kwenyusa izinga lokushisa lezinto zokwakha.
Amalunga Okuphakelwa Kwemifino Enziwe Ngumshini Wokwenza Okuphakelayo Kwezinhlanzi
1.Ama-pellets okuphakelayo angamagciwane, kuphekwe kahle, futhi kulula ukugaya izinhlanzi.
2.Iprotheni yezinto ezisetshenziswayo ichazwa njengemvelo ngemuva kokucutshungulwa yi-extruder yezinhlanzi ezintantayo. Ikhuphuka kwe-digestibility kanye nokunambitha kokuphakelayo.
3.Ama-pellets akhanya, ukuze akwazi ukuntanta ebusweni bamanzi. Yehlisa ukungcola kokuphakelwa nokungcoliswa kwamanzi.
4.Ama-pellets okuphakelayo aqukethe umswakama ophansi, okulungele ukugcinwa nokuhamba.
Idatha Yobuchwepheshe Yomshini Wokwenza Okuphakelayo Kwezinhlanzi Ontantayo
(kw) amandla wokondla
( kw) usuku lwesikulufaimitha
( mm) ukusika amandla
DGP135 0.7-1.0 75 1.1 φ133 2.2
Ividiyo yokwenza umshini wokuphakelwa kwezinhlanzi
I-copyright © 2012-2020 UVictor Pellet Machine. Wonke Amalungelo Agodliwe.